Arrimaha FaceTime oo iyaga dhib
1. FaceTime aan shaqayn
Dhibaatadaas waxaa sababay in aysan update cusub ee ku saabsan qalabka aad. Qalabka FaceTime wajahay arrimaha qaarkood ee la soo dhaafay baqdin shahaadooyin dhacay, kuwaasi oo ay go'an in update ah.
Hubi iyo in la hubiyo in dhammaan aaladaha FaceTime yihiin dib-u-taariikhda on dhamaadka software ah. Haddii aan, iyaga cusbooneysiin.
2. Updated FaceTime weli aan shaqayn
Mararka qaarkood, sababaha software aan shaqayn ma aha sida adag sida aan u malaynayaa. Sidaas, neef badan ku qaadato oo falanqeeyaan waxa laga yaabaa in khalad la goobaha qalab ama ogolaanshaha in laga yaabee in aay baadi this. Sababta ugu badan ee dhibaatadu ay tahay in aan marnaba FaceTime ahaa awood u qalabka in markii ugu horeysay ee halkan ka keentay in ay kari waayeen in ay shaqeeyaan.
Tag Settings FaceTime iyo awood app FaceTime.
3. FaceTime wac guuldareystay
Waxaa jira dhowr sababood oo kala duwan kuwaas oo keeni kara in ay ku fashilmeen in samaynta call a. Waxaa ka mid ah, unavailability ee FaceTime ee dalka, xidhiidh ah oo internet daciif ah ama naafada ah FaceTime on qalab aad. Sababaha kale waxaa ka mid ah isagoo camera xadiday ama FaceTime in aad iPhone shil ama haddii kale.
1. Tag Settings FaceTime iyo hubi haddii FaceTime waa karti. Haddii aan, waxay awood; Si kastaba ha ahaatee haddii, waxaa la horey u karti, isku day in aad marka hore naafo ka dibna mar kale suuragelinayo.
2. Tag Settings General Xadidaada iyo hubi haddii camera iyo FaceTime ayaa aad loo yareeyay.
3. Haddii ay dhibaatada sii socoto, furmaan aad iPhone iyo markaas waxa ay dib mar kale beddelaan.
4. iMessage sugaya hawlgelinta
Tani waa dhibaato guud oo keena in ka qaldan dhigay ilaa waqtiga iyo taariikhda goobaha ama gacanta ama Wi-Fi xiriir ah oo aan waxba ka jirin. Users ee la dariska ah dhibaatadan, hesho fariin leh "iMessage sugaya hawshooda" oo kaliya si aad u hesho "hawshooda u iMessage ku guuldareystay" wax yar ka dib.
1. Hubi in aad Wi-Fi oo la xidhiidha gacanta waa ansax ah oo firfircoon. Waxaa intaa dheer, xaqiijiyo aqoonsiga Apple si aad u aragto haddii ay sax tahay iyo hubiyo taariikhda iyo waqtiga goobaha.
2. Tag Settings Fariimaha iyo toggle iMessages iyo banaankiisaba.
5. calaamad FaceTime ku suganyihiin baadi
Helitaanka qalad ah markii uu isku dayay in ay dhaqaajiso FaceTime yidhaahdeen "ma la soo wareegi karto in. Fadlan hubi xiriir network aad oo isku day mar kale"? Tani waxay dhibaato ku heysa khatar ah waxaa sababa arrimo aad u aasaasi ah oo qaar ka mid ah sida Id Apple ah oo aan raaco qaabka caadiga ah ee cinwaanka email ah. Internet tabar yar ayaa sidoo kale noqon sabab ay calaamad FaceTime ee ku sugan baadi karaan.
1. Haddii aad Apple Id ma aha in qaab email caadiga ah, waxaa loogu badalo ka mid ah ama aad u hesho cusub Apple Id. Isku day saxiixay in la Id cusub, waxa ay si fudud u heli doontaa inaad soo saxiixday in si FaceTime.
2. Beddel goob DNS si aad u Public DNS Google ee sida 8.8.8.8 ama 8.8.4.4 oo isku day mar kale saxiixa in si FaceTime.
6. aan ku xidhi karaa qofka ku FaceTime
Sababta ay u badan tahay in aanay awoodin in ay ku xidhmaan qof kale ku FaceTime waxaa kac ahayn iyaga oo intaa ku daray in ay liiska hor istaagay.
Tag Settings FaceTime Four iyo hubi haddii xiriir la rabay u muuqataa in liiska hor istaagay. Haddii ay sidaas tahay, iyaga tubada by siyoodba icon cas xaq u socda si ay magacooda.
7. Aan awoodin in ay helaan iMessages on iPhone 6
Wax walba u muuqataa okay, laakiin weli aad tahay awoodin inay helaan iMessages aad iPhone 6? Waa hagaag, taasi waxaa laga yaabaa in lagu sababay sabab u tahay meel khaldan network oo si fudud loola dhaqmi karaa iyadoo la isticmaalayo habka ka hor sharaxay.
Tag Settings General celi celi Network Goobta oo ha iPhone ee ay wax ka qaban. Marka Banaadir iyo aad xirmaan shabakad, waxaad yeelan doontaa in ay helaan iMessages sida caadiga ah.
8. FaceTime ee aan shaqada ku iPhone 6
Haddii aad weli arrimaha la FaceTime aad iPhone 6, in la gaadhay wakhtigii aad sameeyey ah in baaritaan qoto dheer oo ku saabsan dhibaatada.
1. Dami FaceTime iyo bedesho Diyaaradeed Mode.
2. haatan ku-Wi Fi oo shid FaceTime sidoo.
3. hab Disable Diyaaradeed hadda, haddii ay soo baxdo Apple Id, waxay siiyaan iyo wax yar ka FaceTime bilaabi doonto ka shaqeynta aad iPhone 6.
9. arrimaha UNI- Carrier FaceTime
Mase sidayaal ah oo ku saabsan iPhone ah ayaa sidoo kale mararka qaarkood waxay keeni kartaa dhibaatooyin la shaqeeya FaceTime. Haddii ay dhacdo noocan oo kale ah waxay dhacdaa, la xiriir side, ugana warrami dhibaatada. In badan oo kiisaska, beddelo kaadh ku xalinayo dhibaatada aad u fudud.
10. FaceTime uma shaqeeyo dalkaygii
Qaar ka mid ah dalalka sida Saudi Arabia aan haysan FaceTime u isticmaala iPhone. Haddii aad ku sugan tahay dalka kasta oo kale, waxaad u baahan tahay inaad eegto qaar ka mid xal kale sida in inta badan xaaladaha, iPhone ku bixisey in gobollada sida ayaa sidoo kale ma haystaan ​​app FaceTime ku rakiban iyaga in.
11. maqan FaceTime app
FaceTime aan la heli karin dhammaan daafaha dunida dacaladeeda, oo sidaas daraaddeed, app FaceTime uusan soo preinstalled in dhammaan qalabka macruufka. Sidaa darteed, haddii FaceTime aan la heli karin in aad dalka, ma heli doontid ah preinstalled app FaceTime. Nasiib darro, ma jiraan shaqada si ay dhibaatadan oo dhan in dadka isticmaala samayn kartaa waa hubi asal ahaan ay qalab ee lagu iibsado si ay u arkaan haddii ay doonaa isagoo app FaceTime ama aan.
> Resource > Top List > Top 11 Arrimaha FaceTime oo iyaga dhib